Philips 3000i, ihe nlele ikuku ikuku [Nyochaa] | Akụkọ akụrụngwa
Philips 3000i, benchmark ikuku ọcha [Review]
na ọcha nke ikuku ha abụrụla ngwaahịa dị iche iche kachasị ewu ewu na ọnwa ndị na - adịbeghị anya. Ha abụrụla ezigbo enyi maka ndị na-arịa ahụ anataghi na ọbụna isi ísì ọjọọ. Dị ka oge niile, na Actualidad Gadget anyị na-anụrịrị maka ọhụụ ọhụụ ọhụụ maka ụlọ gị na oge eruola maka ndị na-ehicha ikuku.
Anyị na-egosi gị Philips Series 3000i ọhụrụ, ihe nhicha ikuku nke kachasị elu na ikike maka ndị ọrụ kachasị achọ. Nọnyere anyị ma chọpụta uru na adịghị ike nke otu n'ime ndị na-ekpocha ikuku dị elu na ahịa.
Dị ka ọ na-adịkarị, anyị kpebiri iso vidiyo ikpeazụ a soro anyị YouTube channel. Na vidio a, n'etiti ihe ndị ọzọ, ị ga-enwe ike idebe igbe zuru oke nke Philips Series 3000i ọcha, yana nkuzi zuru ezu iji nwee ike hazie ya ma mee ka ọ rụọ ọrụ ọfụma. Mgbe e mesịrị, anyị ga-ekwu maka nsonaazụ ya n'ozuzu ma anyị ga-enyocha njirimara ọrụ ya. Nwere ike ịlele vidiyo ahụ ma were ohere ịdenye aha na ọwa YouTube anyị, n'ụzọ ahụ ị ga - enyere anyị aka ịnọgide na - eto eto ma n'ezie anyị ga - aza ajụjụ ọ bụla na igbe igbe.
3 Mmezi na ngwa
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, Philips ahapụgoro anyị mmetụta na - atọ ụtọ n'ihe gbasara arụpụta ụdị ngwaahịa a adịchaghị dị ka nke a. Anyị nwere a cylindrical ngwaọrụ na-emi esịnede ya elu ọkara nke a dụziri akwa uwe na ụlọ ọrụ logo. Na ala anyị nwere isi awọ ma ọ bụ ọcha, na-adabere n'ụdị ahọrọ, nakwa dị ka mkpuchi magnetik dị mfe ịnweta maka nzacha gụnyere na nzacha. Na ọkwa nke ibu na aka, ihe nchacha ahụ na-ahapụ anyị ezigbo mmetụta.
Akụkụ: 645 x 290 x 290
Ibu ibu: 10,5 n'arọ
Agba: Black na ọcha dabere na nhọrọ
N'elu bụ ebe anyị ga-ahụ panel LED nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa, mgbanaka ọkụ RGB LED nke ga-agwa anyị ọnọdụ nke ogo ikuku na perforations nke ikuku zuru oke ga-apụta. Ngwaọrụ a nyochara bụ nnukwu, anyị enweghị ike ịgọnahụ ya, mana nke ahụ na-aga n'ihu na ikike ịdị ọcha ya dị ukwuu. Maka akụkụ ya, anyị nwere usoro ntakịrị ntakịrị nke ga-adị mma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla, dịka ị nwere ike ịhụ na foto ndị soro nyocha a. Agbanyeghị, maka ebumnuche doro anya, ọ dabara adaba na nnukwu ime ụlọ ma ọ bụ kichin.
Nke a 3000i ọcha Ezubere ya maka ime ụlọ ruru mita 104, ọkachasị ọnụ ụlọ a na-emeghe, mana ekele maka sụchụpụ ikuku ya nke 360º anyị ga-enwe ike ịga ụlọ dịtụ mgbagwoju anya n'ogo nke nhazi nke arịa na mgbidi. Ihe nyocha nke CADR, ya bu, ikike nhicha nke ngwaọrụ a ruru mita cubic 400 kwa elekere na ike kachasị nke ika ahụ na-enye. Ndị a bụ ike filtration:
PM2,5 - 99,97% ahụ
H1N1 nje - 99,9
Nje nje - 99,9
Aka akara obubọk
Anyị si otú a nweta nzacha ikike nke ultrafine ahụ dị ka 3 nanometers, ekwuru ya n’isi nso. Iji mee nke a, ọ na-eji teknụzụ abụọ nzacha na nzacha nke abụọ nke akara Philips, dịka VitaShield na AeraSense, patented na sayensị gosipụtara nsonaazụ. Na sensọ larịị, anyị ga-enwe a gas mmetụta na a PM2,5 urughuru ihe mmetụta.
Ime ka ọ dị ọcha na ịrụ ọrụ nke ọma site na sistemụ ikuku ikuku 3D ana - ekpochapu ikuku na ime ụlọ 20 m² na erughị nkeji asatọ..
N'otu ụzọ ahụ, ọ ga-enwe usoro ikuku ikuku HealtyAirProtect na igbochi ya nke ga-emekorita ya na igwe DC na ngwa ngwa mkpanaka.
Mmezi na ngwa
Banyere mmezi, anyị ga-enwe nzacha ya na ọnwa 36 ka akwadoro. Anyị nwere usoro ịdọ aka na ntị na ihuenyo LED na ngwa mkpanaka nke ga-agwa anyị ọkwa nke ogo ikuku na arụmọrụ nke nzacha. A nwalere nzacha a na NaCI aerosol site na iUTA dabere na DIN71460-1, ọ ga-enwekwa usoro nhicha ụlọ iji gbatịa ndụ ya bara uru.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na a pụrụ ịzụta nzacha ndị a iche iche na - ihe mbu dika Amazon maka euro 79, gbakwunye na-atụle ụgwọ nke ihe nzacha ndị ọzọ yiri ya na ngwaahịa asọmpi.
Maka akụkụ ya, ngwa mkpanaka dị maka android na n'ezie maka iPhone (iOS). N'ime ya anyị ga-enwe ike ijikwa ngwaọrụ yana ngwa niile nke ndị a:
Nweta ọkwa ikuku
Nweta akụkọ ikuku na ozugbo
Gbanyụọ ngwaọrụ ma gbanyụọ ya
Gbanwee n'etiti usoro atọ: Turbo, Automatic and Night
Gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ aka
Tinye ya na Siri iji tinyekota na ulo ejikọrọ
Obi abụọ adịghị ya na ngwa ahụ bụ ihe mgbakwunye na-adọrọ mmasị ma na-enyere anyị aka ijikwa ngwaọrụ ahụ na ozi niile enwere ike ịtụ anya ya. O zuru oke ma ọ chọghị ụdị ndenye aha ọ bụla. Ejikọtara njikwa ya na imewe ya nke ọma, mana anyị na-akwa ụta na ị họrọbeghị ijikọ ya na Alexa ma ọ bụ HomeKit Apple. dị ka a ga - asị na ọ na - eme na ngwaọrụ ndị ọzọ Philips na ụdị nke Hue.
Anyị na-ahụ ihe nhichapụ nke kacha mma na ahịa na Philips 3000i a, ngwaọrụ jikọtara ya na ihe niile ị nwere ike ịtụ anya ya na ikike nke ụdị ole na ole nwere ike ịnye. O doro anya na ihe niile a nwere ọnụahịa, ihe dị ka euro 499 dabere na ire ere ahọpụtara ga-ata ụta. O doro anya na ọ bụghị nhọrọ ịbanye n'ahịa, mana ọ bụ ihe kachasị mma ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ ịdị irè, arụmọrụ na arụmọrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ka ikuku dị ọcha n'ime ụlọ buru ibu karịa 100 m2, nke a kwesịrị ịbụ nhọrọ mbụ gị. Nwere ike ịzụta ya na gị isi ihe erere dika El Corte Inglés, MediaMarkt ma obu webusaiti Philips.
Obere ihe eji eme ya na ihe di elu
Mmekọrịta zuru ezu na ngwa na akpaaka
Ihe nzacha nwere ogologo ndụ
Nnukwu ọcha na ike ịrụ ọrụ
Enweghị njikọta na Alexa ma ọ bụ Apple HomeKit
Nnukwu mkpọtụ na oke ike
Eriri ike nwere ike ịbụ ntakịrị oge
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Philips 3000i, benchmark ikuku ọcha [Review]
Kobo weputara Elipsa ohuru ya, onye na-agu akwukwo zuru oke
Cambridge Audio Melomania 1 +: Na-anwa imezi ihe ọkụkụ